स्वास्थ्य/जिबनशैली Archives - Page2of 58 - Taja Report
August 26, 2018 Comments Off on क्यान्सर मात्रै हाेइन, ब्लड प्रेसर र किड्नी समेत ठीक गर्छ जमराले… कसरी उमार्ने र कसरी पिउने?
काठमाडौं/ न दशैँ न त तिहार, बाह्रै महिना गमलामा जमरा उम्रेकै हुन्छ । त्यो पनि घरका सम्पूर्ण कोठामा राखिएका सयौँ गमलामा । बिहान उठ्ने बित्तिकै गहुँ भिजाउनु, माटो तयार गर्नु, जमरा रोप्नु, उम्रीसकेका जमरामा पानी [ पुरा पढ्नुहोस ]
सावधान ! दाँत माझ्ने ब्रस बाथरुममा भुलेरपनि नराख्नुहोस : कारण यस्तो छ
August 25, 2018 Comments Off on सावधान ! दाँत माझ्ने ब्रस बाथरुममा भुलेरपनि नराख्नुहोस : कारण यस्तो छ
दाँत माझिसकेपछि ब्रस सफा गरेर बाथरुमकै ब्रस टोकरीमा राख्ने चलन हुन्छ प्रायः । तर शोधकर्ताहरुका अनुसार बाथरुममा ब्रस राख्नु निकै हानिकारक हुन्छ । बाथरुममा ब्रस राखेर छोड्नाले त्यसमा दिसाका कणहरु टाँसिने सम्भावना ६० प्रतिशत हुन्छ [ पुरा पढ्नुहोस ]
दुई मिनेटमै पहेँलो दाँत सेतो र चम्किलो यसरि बनाउन सकिन्छ:: पुरा हेर्नुस तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ]
August 25, 2018 Comments Off on दुई मिनेटमै पहेँलो दाँत सेतो र चम्किलो यसरि बनाउन सकिन्छ:: पुरा हेर्नुस तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ]
नोट :- [ भिडियो अन्त्यमा छ… ] क्यान्सर, यौन दुर्बलता, मुटु रोग जस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन पोलेको लसुन लसुन प्राय सबैको भान्सामा पाइने एक प्रकारको सब्जी तथा मसला हो । लसुन खानाले हुने फाइदाका बारेमा [ पुरा पढ्नुहोस ]
गोरो हुन मन छ ? खानुहोस् यी कालो खानेकुरा !
August 24, 2018 Comments Off on गोरो हुन मन छ ? खानुहोस् यी कालो खानेकुरा !
एजेन्सी । केही काला रङका खानेकुरा यस्ता हुन्छन्, जुन हाम्रो शरीरको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छन् । डाइटिसियनका अनुसार यस्ता खानेकुरा खानाले हाम्रो छालाको रङ पनि गोरो हुन जान्छ । कालो चना – यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुनुका [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 23, 2018 Comments Off on काँचो केराको अचुक फाइदा, तौल घटाउनेदेखी कब्जियत हटाउनेसम्म
एजेन्सी : केरा मानिसले सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने फलमा पर्छ । केरा निकै स्वादिलो र अरु फल भन्दा सस्तो हुने भएकाले पनि प्राय मानिसले यसलाई रुचाउने गर्छन् । केरा हामी बर्ष भरी नै बजारमा पाउने [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 23, 2018 Comments Off on कम्मर दुख्ने, अनुहारको दाग वा पोतो हटाउने अचुक ओखती कालो तिल
काठमाडाैं : कालो तिल अथवा तिलबाट प्राप्त हुने बिऊ तेल उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अनुहारमा चायाँ, पोतो वा दाग, कालो घब्वा आदि आएमा त्यसलाई सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। साथै कम्मर दुख्ने रोगलाई पनि निको पर्न सकिन्छ [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 23, 2018 Comments Off on युरिक एसिड कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
आधुनिक जीवनशैली एवं खानपानले धेरैजना युरिक एसिडको समस्याले पीडित छन् । दीर्घकालीन रोगका रूपमा लिइने युरिक एसिडबाट जोगिन निम्न उपाय अपनाउनुपर्छ। –सर्वप्रथम शरीरको तौल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बढी तौल भएको शरीरमा युरिक एसिड थुप्रिएर बस्छ [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 23, 2018 Comments Off on सदाबहार जवान भइरहन चाहानु हुन्छ ? पत्ता लाग्यो वैज्ञानिक उपाय
प्राकृतिक नियम नै हो मानिस जन्मेपछि विस्तारै बुढो हुँदै जान्छ । कसैलाई पनि बुढो हुन मन लाग्दैन । तर समयक्रमसँगै मानिस विस्तारै बुढो हुन्छ । तर अब बैज्ञानिकहरुले बुढो नदेखिने औषधी पत्ता लगाएका छन् । [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 23, 2018 Comments Off on यस्तो कुहिएको मासुको ससेज बनाएको भेटेपछी, सक्दो सेयर गर्नुस
यस्तो कुहिएको मासुको ससेज बनाएको भेटेपछी, सक्दो सेयर गर्नुस जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, उपभोक्ता मंच कास्की र पोखरा महानगरकी खाद्य निरीक्षक लगायतको टोलीले बजार अनुगमनलाई तिव्र पारेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा कयौन वेतिथिहरु फेला [ पुरा पढ्नुहोस ]
चिन्ताको बिषय बन्नलग्यो स्वाइन फ्लु !! भेटियो चितवनमा २८ जना स्वाइन फ्लुका बिरामी
August 23, 2018 Comments Off on चिन्ताको बिषय बन्नलग्यो स्वाइन फ्लु !! भेटियो चितवनमा २८ जना स्वाइन फ्लुका बिरामी
चिन्ताको बिषय बन्नलग्यो स्वाइन फ्लु !! भेटियो चितवनमा २८ जना स्वाइन फ्लुका बिरामी चितवनमा इन्फ्लुयन्जा ए ९एच वान एन वान० अर्थात् स्वाइन फ्लुका बिरामी भेटिएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गराउन आएका विरामीमध्ये एकै [ पुरा पढ्नुहोस ]